अनलाइन मानसिक रीडिंग > भिडियो > फोन द्वारा निःशुल्क मनोवैज्ञानिक पढाई
मेगन मार्च 23, 2017 भिडियोTagged adimmix मानसिक लेह, बोल्डर मनोिक, बोल्डर ..., क्रिस्टल बच्चाहरु मानसिक पुस्तकहरु, सशक्तिकरण, ऊर्जा पढ्ने, विकास, नि: शुल्क अनलाइन मानसिक कुराकानी, नि: शुल्क मानसिक प्रश्न, उपहार, निको, प्रत्यक्ष मानसिक, प्रत्यक्ष मनोिक अनलाइन, प्रत्यक्ष मनोविज्ञान, प्रेम मानसिक पढाइ, मानसिक पढाइलाई प्रेम गर्नुहोस्, अनलाइन मनोिक, फोन मानसिक, मानसिक, मानसिक लेह, मानसिक पढाइ, मानसिक पढाइहरु, मनोविज्ञान, आत्म-विकास, आत्मा उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक मानसिक रीडिंग, आफ्नो मानसिक परीक्षण गर्नुहोस्, क्रिस्टल बच्चाहरु मानसिक, भिडियो, वेब क्यामेरा7 टिप्पणिहरु फोन द्वारा नि: शुल्क मनोवैज्ञानिक पढाई
के तपाईं फोन द्वारा नि: शुल्क मानसिक पढाई चाहानुहुन्छ? मेरो निःशुल्क न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्नुहोस्: http://eepurl.com/r2sin। र फोन द्वारा नि: शुल्क मानसिक पढाई जीतने को लागी एक रेखाचित्र मा प्रवेश गर्नुहोस। मेरो साइटमा जानुहोस्: http://theboulderpsychic.com/। थप पत्ता लगाउन। यो भिडीयोमा मैले काम गर्दछु भनेर व्याख्या गर्दछु र के तपाईं मेरो साथ एक सत्रबाट बाहिर जाने आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
मांडी सी भन्छन्:
मार्च 23, 20175मा: 06 हूँ
मेरो सम्पूर्ण जीवन मैले जनताको भावना पढ्न सक्थे र सधैँ यो भावनाले गर्दा मलाई थाहा थियो कि कसैलाई के गर्ने थियो र उनीहरुले कसरी सोचिरहेका छन् कि सबैले मलाई सधै भन्नु भएको थियो कि तिमी यति धेरै सहज हो कि जब मैले राशि मा विश्वास गर्नु भयो किनकी म पिस्स र सबै कुरा भन्छु मेरो साइन सबै सबै बिन्दुमा मेरो BF ले यो सामानमा विश्वास गरेसम्म सम्म मैले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छ अब सधैं सधैँ डराउन चाहन्छु।
तिमी धेरै सुन्दर छौ
MB Vistas भन्छन्:
पूर्णतया भिडियोलाई प्रेम गर्नुहोस् र तपाईंले के वर्णन गर्नुहुन्छ निश्चित छ! म विश्वास गर्दछु फोनमा प्राप्त मनोवैज्ञानिक पढाइ, जस्तै तपाईं वर्णन र मा http://PhonePsychicReading.com यसको धेरै स्वभावले, अधिक तीव्र र अधिक शुद्ध छ। भिडियोको लागि धन्यवाद!
राहेल हेन्स भन्छन्:
हो, मूल भिडियो लगभग तीन वर्ष पहिले प्रकाशित भयो। फोन मार्फत नि: शुल्क पढ्नको लागि प्रस्ताव अब मान्य छैन। यदि तपाईं परामर्श वा पढ्न चाहानुहुन्छ भने, मेरो वेबसाइटमा भ्रमण गर्नुहोस् theboulderpsychic.com
शेन्सी डिस भन्छन्:
शीर्षकले नि: शुल्क पढ्ने भन्छ, तर भिडियोको बारेमा केही उल्लेख गरिएन!
shrna valli भन्छन्:
म तपाईबाट पुनः खरिद गर्न चाहानुहुन्छ म के गर्न चाहन्छु
जिमी गारल्याण्ड भन्छन्:
एक मानसिक अर्को अर्को परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष् दिनुहुन्छ